Xiaomi na-enye ihe ngosi laser maka ihe na-erughị dollar 1500 | Akụkọ akụrụngwa
Fewbọchị ole na ole gara aga, anyị gosiri gị njirimara nke ọrụ laser ọhụrụ nke Dell Advanced 4k, 100-inch, 120 Hz na 4k laser projector nwere ọnụahịa mmalite nke $ 5.999 nke a ga-atụnye ụtụ isi kwekọrọ na steeti ọ bụla. Taa, anyị na-ekwu maka ihe ngosi ọhụụ nke Xiaomi gosipụtara, Mi Laser Projector, ihe nyocha nke dị ọnụ ala karịa, ihe dịka $ 1500 na China. Ọrụ a na-enye anyị ohere ịnụ ụtọ ọdịnaya anyị kachasị amasị anyị na atụmatụ nke anụ ọhịa 150 ma na-eji otu teknụzụ eme ihe dịka ọtụtụ ime ụlọ na mba Eshia.
Iji mee ka Mi Laser Projector ghọọ Home Teather n'ụlọ anyị, ụlọ ọrụ Ọ gụnyere onye na-ekwu okwu agbakwunyere ma na-eji otu interface ahụ anyị nwere ike ịhụ na Mi TV igbe set-top iji rie ọdịnaya site na nkwanye nke otu ụlọ ọrụ ahụ wepụtara ọnwa ole na ole gara aga.
Uru nke iji teknụzụ laser maka ọrụ, ọ bụghị naanị na-ekwe ka mkpebi dị elu, mana ogo ahụ na-emewanye nke ọma, anyị na-eme kpamkpam na-enweghị oke ọkụ ọkụ karịa ndị na-arụ ọrụ ọdịnala ma anyị na-echekwa ọtụtụ ohere, ebe ọ bụ na ụdị ndị a na-arụ ọrụ dị n'akụkụ mgbidi ebe anyị chọrọ ịrụ ọrụ ahụ.
Maka ugbu a, ụlọ ọrụ ahụ enyebeghi ozi ndi ozo banyere ogo ihe ngwaọrụ a nwere ike ịnye anyị, dịka oke mkpebi ọ kwadoro, Hz ... yabụ anyị ga-echere ruo mgbe ọnwa Julaị na-esote, ụbọchị nke ụlọ ọrụ mepee oge ndoputa maka ihe ngosi a.
My Laser Projector na-eji ALPD 3.0, teknụzụ ọkụ laser nke Appotronics mepụtara, ụlọ ọrụ ahụ nọ na 90% nke ụlọ ihe nkiri nkiri dị na China. Mana ọ dị ka ọrụ Xiaomi n'ọdịnihu anaghị akwụsị na mmekorita ụlọ ọrụ a, ebe ọ bụ na ngwaọrụ n'ọdịnihu ọ ga-eji teknụzụ DLP si Texas Instruments.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Xiaomi na-enye ihe ngosi laser maka ihe na-erughị dollar 1500
MareNostrum 4, kọmputa kọmputa nke Spanish, dị njikere ịrụ ọrụ